နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: အဖော်မွန်
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 5:22 AM
အသဲလေးတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ် October 13, 2012 at 6:39 AM
တောက်ပကြယ်စင် October 13, 2012 at 6:51 AM
အားလုံးကို သတိတရရှိတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
ချစ်စံအိမ် October 13, 2012 at 10:37 AM
စံပယ်ချို October 13, 2012 at 7:54 PM
အမြဲမခွဲပဲ လက်တွဲအတူတူ ရှိနေကြမယ်
ညီလင်းနိူင် October 13, 2012 at 10:06 PM
ကဗျာလေးခံစားပြီး ကြည်နူးစိတ်ဖြစ်မိပါတယ် ။
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် October 13, 2012 at 10:15 PM
ခံစားချက်လေးကောင်းတယ် ကျန်းမာရေးလဲ ဂရုစိုက်အုံးနော်
kiim October 13, 2012 at 10:25 PM
အမက အဲ့လိုကြည်နူးစရာလေးတွေသိပ်မရေးတတ်လို့ 
ရေးတတ်တဲ့ သူတွေကိုသဘောကျတယ်..း)
လေပြေချို October 13, 2012 at 10:54 PM
အမြဲမခွဲပဲ လက်တွဲအတူတူ ရှိနေကြမယ်နော် ....
အေးအတူပူအမျှပေါ့.. အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်လေးက မိန်းမသားတွရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အချစ်ကို ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိအောင် ပံ့ပိုးပေးတယ်လို့ ကိုယ်တော့မြင်တယ်..
ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်အုံးနော် :)
roseayemaung October 14, 2012 at 5:11 AM
အမြဲမခွဲပဲ လက်တွဲအတူတူ ရှိနေကြမယ်..
May Khin October 14, 2012 at 5:20 AM
မြတ်နိုးသူ October 14, 2012 at 5:22 AM
မိုးနတ်ကြယ်စင် October 14, 2012 at 6:40 AM
ဒီကြားထဲ ကွန်ပြူတာကိုလဲ အလွတ်မပေးပဲ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကြည့်နေတော့.
ဆရာဝန်က မျက်မှန်တပ်နေရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီး...အာရုံကြောအားဆေး ၂လသောက်ရမယ်တဲ့....ဟင့်..ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့ ...အိမ်လေးနဲ့မှ မခွဲနိုင်တာကို...ဒါပေမဲ့ မသက်သာရင်တော့...နဲနဲနားရမယ်ထင်တယ်..
မဟုတ်ရင် မျက်မှန်တပ်ရမှာစိုးလို့လေ....တကယ်လို့ လိုင်းပေါ်ကို မလာဖြစ်ဘူးထင်ရင်လဲ ပို့စ်တွေကိုတော့ မှန်မှန်တင်ပေးပါ့မယ်..ဘော်ဘော်တွေ အိမ်တွေကို လိုက်မလည်နိုင်ရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ကြပါနော်....
Sweety Snow October 14, 2012 at 9:44 AM
စာတွေအများကြီး ရေးနိုင်ပါစေ မိုးနတ်ရေ.. ချစ်စရာအဖော်မွန်လေးနဲ့လည်း လက်တွဲနိုင်ပါစေ :)
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! October 14, 2012 at 10:47 AM
နားနားနေနေနေပါ မိုးနတ်ရေ.. မျက်လုံးဆိုတော့ ဂရုစိုက်နော် ...
ရိုးမြေကျ October 14, 2012 at 7:32 PM
ဟမ်မိုးနတ်လေးလဲ အာရုံကြောအားဆေးသောက်နေရတာလား။အစ်မက သုံးလသောက်ရမှာ။အဖော်ရှိသွားပီ။ဟေး။ ဒါပေမယ့် စာတွေတော့ အဆက်မပြတ်တင်ပါကွယ်။ အဖော်မွန်လေးနဲ့လဲ မခွဲအတူရှိပါစေ။
Nwai La October 15, 2012 at 12:34 AM
ကျွန်တော်လည်း အစ်မ ခံစားရသလိုပဲ ခံစားနေရတယ်
ဒါကြောင့်မို့ ဟာသဆန်ဆန်လေးတွေပဲ ရေးနေမိတာ
ကဗျာလေးကို ဖတ်သွားတယ် ... နင့်သွားသလိုပဲ
ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ အစ်မရေ
မိုးသူ(တောင်ကြီး) October 15, 2012 at 12:44 AM
မိုးနတ်ရေ စိတ်က ဘာဖြစ်လို့ လေရတာလဲဟင်
ခေါင်းမူးတာက အာရုံကြောအားနည်းလို့ ထင်တယ်
နှလုံးသားချင်း တသားထဲကျမယ့် ချစ်သူမျိုး
မိုးခါး October 16, 2012 at 10:05 PM
အားဆေးလည်းတိုက်မယ် .. ခေါင်းမူးပျောက်ဆေးလည်း တိုက်သွားမယ် ..း))
ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ .. နေကောင်းတော့ အိမ်တွေလိုက်လည်ပေါ့ ..း))
အဖော်မွန်လေးနဲ့ ဘ၀တသက်တာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အတူလက်တွဲနေနိုင်ပါစေ ..း)